Ross Young wuxuu leeyahay waxaan arki doonnaa 27-inji ah iMac mini-LED iMac horaanta 2022 | Waxaan ka imid mac
Ross dhalinyaro, Maamulaha La -taliyayaasha Chain Supply ayaa saxay faalladiisii ​​hore ee shabakadda bulshada ee Twitter -ka oo la bilaabay maalmo ka hor. Kiiskan MacRumors wuxuu ku celcelinayaa sixitaanka Young ee barta caanka ah.
Xaaladdan oo 27-inji ah oo loogu talagalay iMac waxay soo bandhigi doontaa iftiin-mini-LED backlighting, taas oo laga yaabo inay la micno tahay inay ku dari doonto magacaabista XDR ee aan ku aragnay 14-inji cusub iyo 16-inji MacBook Pros dhawaan. Sida laga soo xigtay Young, Apple waxay qorsheyneysaa inay ku soo saarto iMac cusub shaashadan rubuca hore ee 2022.
Tweet -ka aad ku saxdo faallooyinkaagii hore kaas oo ayaa sheegay in Apple ay qorshaynayso in ay sii dayso kormeere dibadeed Astaamahan oo hadda ku daraya 27-inji iMac waa kuwan soo socda:
Hagaag, tweeted goor hore. Shaashadda 27 ″ MiniLED waxay ku socotaa iMac Q1'22, ma aha kormeere dibadeed. Waxaa laga yaabaa in uu arko kormeere hadhow. Wali waa 24Hz - 120Hz oo is -bedbeddel leh… Waan ka xumahay jahwareerka!
- Ross Young (@DSCCRoss) October 20, 2021
Waxaan ka soo qaadan karnaa in saadaasha bilaabista shaashadu ay sidaas darteed khalad ahaayeen oo kiiskan waa 27 iMac oo leh ProMotion, kaas oo u oggolaanaya heerka cusboonaysiinta la -qabsiga ee u dhexeeya 24Hz iyo 120Hz si loo wanaajiyo waxqabadka qalabka. Dhallintu runtii ma tilmaamayso waxa noqon doona xallinta shaashadda moodelkan cusub ee iMac ee soo socda oo ah kan qaabka 27-inji ee hadda jira wuxuu leeyahay qaraar 5K ah waxayna u muuqataa runtii mid wanaagsan. Waxaa suurtogal ah in kormeeraha Young uu ka hadlay uu marka hore imaan doono dabayaaqada sannadkan soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » iMac » Ross Young wuxuu leeyahay waxaan arki doonnaa 27-inji ah iMac mini-LED iMac horaanta 2022
Nomad waxay billowday kiiskeeda Hargaha Casriga ah ee AirPods 3